ရာဇဝတ်မူ လုံးဝမရှိတဲ့ မြန်​မာနိုင်​ငံအတွင်းက ရွာက​လေး !!!! – MyanmarEating
ရာဇဝတ်မူ လုံးဝမရှိတဲ့ မြန်​မာနိုင်​ငံအတွင်းက ရွာက​လေး !!!!
Posted by Phyu Phyu on October 29, 2018
လူတိုင်း ခရီးသွားကြပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီ​နေရာကို​တော့ ​ရောက်​ဖူးသူ နည်းကြမှာပါ။ မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ ရာဇဝတ်​မှု မရှိ / ရပ်​ကွက်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေမှုး မရှိ၊ တည်​ငြိမ်​​အေးချမ်းတဲ့ ရွာလေးတစ်​ရွာ ရှိတယ်​ဆိုရင်​ အံဩမိကြမှာပါ။
ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ အချက်​​တွေက အိမ်​တိုင်းမှာ ခြံစည်းရိုး မရှိ, မခတ်​ထားတာပါပဲ။ သူခိုး/ဓားပြလည်း မရှိ ပါဘူး။ ကိုယ်​ကိုယ်​တိုင်​က ကိုယ့်​ရွာရဲ့ ခေါင်း​ဆောင်​ဆိုပြီး ခံယူထားကြပါတယ်​။
နောက်​ပြီး ရွာအတွင်း စီးပွား​ရေးလုပ်​ခွင့်​မရှိတာပါပဲ။ ဘာကုန်​ပစ္စည်းဆိုင်​မှ မရှိတာပါ၊ စီးပွား​ရေးကို တော့ ရွာအပြင်​မှာပဲ ထွက်​ပြီး စီးပွားရှာကြပါတယ်​။ မြို့နဲ့လည်း သိပ်​မ​ဝေး​တော့ အဆင်​​ပြေတာ​ပေါ့။
ဒီရွာရဲ့ အထူးနာမည်​ကြီးတာက​တော့ တိတ်​ဆိတ်​ ​အေးချမ်းခြင်း ပါပဲ။ ကရင်​လူမျိုး​တွေ၊ မျိုးနွယ်​​ပေါင်းစုံ စု​ဝေး​နေထိုင်​တဲ့ ရွာ​လေး တစ်​ရွာလည်း ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီရွာကို တည်​စက ထမင်းမစား ရေမ​သောက်​ဘဲ ပင်​ပင်​ပန်းပန်းနဲ့ တည်​ခဲ့ရတယ်​လို့ အိ်​မ်​ရှင်​ အဘိုးတစ်​​ယောက်​ ​ပြောပြလို့ သိခဲ့ရပါတယ်​။
ရွာအတွင်းက လူ​တွေ ဟာလည်း ရိုးသား ဖြူ စင်​ကြပါတယ်​။ တစ်​​ယောက်​ကိုတစ်​​ယောက်​ ကူညီရိုင်းပင်းရင်း မိမိရွာကို ထိန်​သိမ်း​စောက်​​ရှောက်​နေကြတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
အိမ်​​ခြေအားဖြင့်​ ၅၀ ​ကျော်​ခန့်​ ဧကအနည်းငယ်​သာ ကျယ်​ဝန်းတဲ့ ဒီရွာက​လေးက​တော့ ကရင်​ပြည်​နယ်​ ဘားအံမြို့အနီး ဇွဲကပင်​ ​တောင်​​ခြေမှာ တည်​ရှိတဲ့ မွန့်​စရီး ဆိုတဲ့ ​ကျေးရွာ​လေးပဲ ဖြစ်​ပါ​​တယ်​ Credit ‘ peter SutNau
လူတိုငျး ခရီးသှားကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနရောကိုတော့ ရောကျဖူးသူ နညျးကွမှာပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ရာဇဝတျမှု မရှိ / ရပျကှကျ အုပျခြုပျရမှေုး မရှိ၊ တညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့ ရှာလေးတဈရှာ ရှိတယျဆိုရငျ အံဩမိကွမှာပါ။
ပိုပွီးထူးခွားတဲ့ အခကျြတှကေ အိမျတိုငျးမှာ ခွံစညျးရိုး မရှိ, မခတျထားတာပါပဲ။ သူခိုး/ဓားပွလညျး မရှိ ပါဘူး။ ကိုယျကိုယျတိုငျက ကိုယျ့ရှာရဲ့ ခေါငျးဆောငျဆိုပွီး ခံယူထားကွပါတယျ။
နောကျပွီး ရှာအတှငျး စီးပှားရေးလုပျခှငျ့မရှိတာပါပဲ။ ဘာကုနျပစ်စညျးဆိုငျမှ မရှိတာပါ၊ စီးပှားရေးကို တော့ ရှာအပွငျမှာပဲ ထှကျပွီး စီးပှားရှာကွပါတယျ။ မွို့နဲ့လညျး သိပျမဝေးတော့ အဆငျပွတောပေါ့။
ဒီရှာရဲ့ အထူးနာမညျကွီးတာကတော့ တိတျဆိတျ အေးခမျြးခွငျး ပါပဲ။ ကရငျလူမြိုးတှေ၊ မြိုးနှယျပေါငျးစုံ စုဝေးနထေိုငျတဲ့ ရှာလေး တဈရှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီရှာကို တညျစက ထမငျးမစား ရမေသောကျဘဲ ပငျပငျပနျးပနျးနဲ့ တညျခဲ့ရတယျလို့ အိမျရှငျ အဘိုးတဈယောကျ ပွောပွလို့ သိခဲ့ရပါတယျ။
ရှာအတှငျးက လူတှေ ဟာလညျး ရိုးသား ဖွူ စငျကွပါတယျ။ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ကူညီရိုငျးပငျးရငျး မိမိရှာကို ထိနျသိမျးစောကျရှောကျနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အိမျခွအေားဖွငျ့ ၅၀ ကြျောခနျ့ ဧကအနညျးငယျသာ ကယျြဝနျးတဲ့ ဒီရှာကလေးကတော့ ကရငျပွညျနယျ ဘားအံမွို့အနီး ဇှဲကပငျ တောငျခွမှော တညျရှိတဲ့ မှနျ့စရီး ဆိုတဲ့ ကြေးရှာလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။